ရွှေနိုင်ငံ: စက်တင်ဘာ ၁ရက်နေ့တွင် မိုးသီးဇွန် မြန်မာပြည် ရောက်မည်
ကျနော်နဲ့ အတူ ကိုထွန်းအောင်ကျော်၊ကိုကိုလေး၊ကိုမူးသာ၊ ကိုရင်အေး၊ကိုရွှေစင်၊ ကိုကိုအောင်ကိုအေးမင်း တို့ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အဓိက ဆွေးနွေးမဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ နိင်ငံရေးအအရ အခြေခံကျသော ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး၊ တိုင်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၊ ဆင်းရဲမှုတွေမှု၊အလုပ် လက်မဲ ပြသနာ၊ မြန်မာနိင်ငံသားတိုင်း မိမိနိင်ငံကို ပြန်လည် ထူထောင်ရေးမှာပါဝင်နိင်ရေး လုံခြုံစိတ်ချစွာ ပြန်နိင်ရေး စတာ တွေ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေဟာ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်တုို့ အစွမ်းကုန်ကြိးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါ
တယ်။မိတ်ဆွေ တို့ ရဲ့ အားပေးကူညီမှုများ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
Anonymous6September 2012 at 16:54
လာမနေပါနဲ့ ကွာ၊ ရှုပ်ပါတယ်၊ မင်းမလာလဲအဆင်ပြေနေတာပဲ
ငါတို့ နိုင်ငံတော်မှာ အမှိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပဲပြောချင်တယ်။
ကိုမိုးသီးရယ် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးဆိုတဲ့ပြဇာတ်နဲ့ ပြည်ပမှာကပြအသုံးတော်ခံ(တောင်းရမ်းစားသောက်)ရတာ အရင်လိုနေ့တွက်မစီတော့ဘူးထင်ပ။
Anonymous 23 September 2012 at 03:10
မင်းအဆင့်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ . နိုင်ငံအတွက်မင်းဘာလုပ်ပြီးပြီလဲ . မင်းဘာကောင်လဲ . နိုင်ငံမှာပါးစပ်သမားတွေမလိုဘူး . ကိုယ့်အလုပ်လုပ်မဲ့သူပဲလိုတယ် . သိပ်အကြီးကြီးတွေမပြောနဲ့ကွာ . မင်းကိုယ်မင်းမှန်ထဲပြန်ကြည့် . မေးခွန်းတွေပြန်မေး